Kiis-ka-baaraandegidda UNE - UNE
Warbixintii ugu danbaysay: 02/10/201702/10/2017
UNE waa hey’ad cabasho loo qaato
Shaqada UNE waa in aan hubinno in uu go’aanka UDI sax yahay. Marka uu qofku cabasho ka qaato diidmada UDI, mar kale ayaan kiiska qiimayn ku samaynaa. Kuma khasbanin in aan raacno diidmadii UDI, laakiin isku xeerar ayaan raacnaa. Diidmooyinka badankooda lama beddelo.
UNE ayaa kiiskaaga diyaarisa
Waan kuu soo sheegeynaa marka uu kiiskaagu na soo gaaro. Kiisaska UNE soo gaara waxaa intooda badan laga baaraandegaa innaga oo aan la hadlin qofka uu kiisku khuseeyo. Taas oo ay sababteedu tahay in ay UDI kiisaska horay u soo diyaarisay. Haddii loo baahdo, warbixinno kale oo kiiskaaga ku saabsan ayaan soo qaadannaa.
UNE kiiskaaga ayay qiimayn ku samaysaa
Qiimayn ayaan ku samaynaa dhammaan warbixinnada kiiskaaga iyo wixii aad cabashada ku soo qortay. Warbixintan ayaa loo eegayaa sida uu sharcigu dhigayo. Ugu yaraan laba qof ayaa had iyo jeer kiiska eegaya.
Jawaab qoraal ah ayaad UNE ka heli doontaa
Marka aan dhammayno ka-baaraandegga kiiskaaga, go’aan qoraal ah ayaad naga heli doontaa. Taas oo micnaheedu yahay in kiiska go’aan laga gaaray, kaddib markii ay UDI iyo UNE labaduba qiimeeyeen. Haddii ay UNE diidmo ku siiso, ma jirto meel kale oo cabasho loo qaato.